Fandikan-dalàna fadintseranana : Voaheloka higadra 5 taona an-tranomaizina sy handoa onitra 27 miliara Ariary ilay mpandraharaha Mbola Rajaonah
jeudi, 26 mai 2022 17:02
Vita androany maraina teny amin’ny Pôle anti corruption na Fitsarana manokana miady amin’ny kolikoly etsy amin’ny 67ha, ny fitsarana an’i Mbola Rajaonah, mpandraharaha sady mpanolontsaina manokan’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, rehefa notanana am-ponja vonjimaika nandritra ny telo taona mahery.
Naharitra adim-pamantaranandro 20 mahery ny fihainona ireo voampanga, dia i Mbola Rajaonah sy olona 17 hafa, anisan’izany ireo mpitatitra entana sy ireo mpanara-maso ny ladoany, ary koa ireo vavolombelona 30 isa teo, ireto farany mpanara-maso ny ladoany ny ankamaroany.
Nohelohin’ny Fitsarana higadra dimy taona an-tranomaizina, sazy mihatra, i Mbola Rajaonah, miampy onitra 27 177 963 488 Ariary, noho ny fandikan-dalàna tamin’ny fadintseranana, nitranga teo anelanelan’ny taona 2014 sy 2018.
Herintaona an-tranomaizina mihantona kosa ireo mpitatitra entana voampanga niaraka taminy. Ary afaka madiodio avokoa ireo mpiasan’ny ladoany ambiny voarohirohy tamin’ity raharaha ity.
Ny tolakandron’ny 13 Febroary 2019 i Mbola Rajaonah no nosamborina teo Antsahabe Antananarivo. Notanana am-ponja vonjimaika teny amin'ny Fonjaben'i Tsiafahy avy hatrany ny androtr’io. Naharitra telo taona mahery tany, vao nafindra eny amin'ny Fonja vaovaon'i Imeritsiatosika, ny volana Aprily 2022, noho ny antony ara-pahasalamana.
Efa nenjehina ho nampiasa taratasy tsy misy anto-bola i Mbola Rajaonah ny taona 2019 saingy nohafahan’ny Fitsarana izy tamin’io raharaha io.